I-China 120 Steel formwork formwork factory and suppliers |I-Lianggong
120 Uhlaka Lwensimbi
I-120 steel frame wall formwork wuhlobo olusindayo olunamandla aphezulu.Ngensimbi ekwazi ukumelana ne-torsion-hollow-section njengamafreyimu ahlanganiswe neplywood yekhwalithi ephezulu, i-120 steel formwork formwork igqama ngesikhathi sayo sempilo ende kakhulu kanye nokuqedwa kukakhonkolo okungaguquki.
Isistimu yohlaka lwensimbi engu-120 Kubandakanya iPlywood, akukho ukuhlanganiswa kwangaphambili kwesistimu okudingekayo.
Isetshenziswa Ikakhulukazi kuzo zonke izinhlobo zezindonga njengezindonga ze-Shear, izindonga eziwumgogodla kanye nosayizi abahlukahlukene Bamakholomu obude obuhlukahlukene.
I-120 Steel frame system iyi-Steel framed Panel System, elungele ukusetshenziswa futhi eqinile kakhulu.
Amaphaneli angu-3.30m, 2.70m kanye no-1.20m anobubanzi obuhlukahlukene ukusuka ku-0.30m kuya ku-2.4m ngezikhawu ezingu-0.05m noma ezingu-0.15m usayizi wobubanzi bephaneli bungasebenza ngakho konke ukusebenza kahle kwesicelo.
Lonke uhlelo lohlaka lwensimbi eyi-120 lususelwe kuphrofayili ebandayo eyenza ama-roll emaphethelweni.Iphrofayili ye-Thiss edge ilungiswa ngokuma okukhethekile ngaphakathi okuvumela ukusetshenziswa kwe-Couple yokuqondanisa.
Izimbobo zinikezwe kumaphrofayili onqenqema olume mpo ukuqondanisa ncamashi kwephaneli emisiwe kwenziwa kwaba nokwenzeka ngekhefu lephrofayela enqenqemeni ngokusebenzisa i-crowbar (noma isisusi-zinzipho).
Ishidi leplywood elingu-18mm eliwugqinsi lisekelwa imigoqo ephakathi eyisishiyagalombili noma eyishumi yomklamo olinganayo.Baphinde banikeze amathuba amaningi okunamathiselwe kwezinsiza zohlaka lwe-120 Steel frame.Uhlaka Lwensimbi lupendwe ngokuphelele.
Wonke amaphaneli angahlanganiswa ngezindlela ezihlukahlukene, elele ezinhlangothini zawo noma emile eqondile.Angaphinda afakwe ngohlelo olumile njengoba ukuxhumana kwawo kuzimele kunoma imaphi amamojula obukhulu.
Ukujula kwephaneli okungu-12cm kuqinisekisa umthamo omuhle wokuthwala (70 KN/m2) Ukuze kungacatshangelwa ukuthi i-formwork yeNdaba Eyodwa engamamitha angu-2.70 no-3.30 ubude, ingcindezi kakhonkolo nezinga lokubeka ukhonkolo kungadingeki kucatshangelwe.I-plywood engu-18mm ewugqinsi inamatheliswe ka-7 futhi lapho isakazwa ezindongeni zamatshe.
Zonke izingxenye zilungele ukusetshenziswa lapho zifika endaweni.
Amaphrofayili akhethekile asuka kuhlaka, andise amandla ephaneli futhi aqinisekise impilo ende yesevisi .Ngokusebenzisa amaphrofayili amise okwesipesheli kanye nezinsimbi zokucindezela okukodwa, ukuxhumeka kwamaphaneli kulula kakhulu futhi kuyashesha.
Ukuxhumana kwephaneli akuncikile emigodini yamaphrofayili ozimele.
Uhlaka luzungeza i-plywood futhi luvikela imiphetho ye-plywood ekulimaleni okungafunwa.Ama-clamp ambalwa anele uxhumano oluqinile.Lokhu kuqinisekisa ukufinyeza isikhathi sokuhlanganisa kanye nokuqaqa.
Uhlaka luvimbela amanzi ukuthi angene ku-plywood ngokusebenzisa izinhlangothi zawo.
120 Uhlelo lwensimbi yensimbi luqukethe ifreyimu yensimbi, iphaneli yeplywood, i-push pull prop, ubakaki wesikafula, i-coupler yokuqondanisa, i-waler yesinxephezelo, induku yokubopha, ihuku lokuphakamisa, njll.
Amapulangwe e-plywood enziwe nge-wisa ifomu leplywood elinekhwalithi ephezulu .amafreyimu ensimbi akhona enziwe ngensimbi ekhethekile ebandayo eyakha insimbi
I-waler yesinxephezelo iqinisa ukuqina kwayo kokuhlanganisa endaweni yokuxhuma kwephaneli.
Ukusebenza okulula, isisindo esincane, isitoreji esikahle kanye nokuhamba.
Ukusebenzisa izingxenye ezifakwe ohlelweni oluyisisekelo, uzokwazi ukuxazulula izinkinga ze-formwork ekwakhiweni kwezimboni nezindlu.
Izingxenye ezifakwe ezingxenyeni ezengeziwe zandisa amathuba ohlelo lokusebenza lwe-formwork futhi zenze kube lula ukuhlanganisa.
Amakhona angewona ama-rectangular angavele avalwe ngamakhona anehingiwe namakhona angaphandle.Uhlu lokulungiswa lwalezi zingxenye luvumela amakhona angama-oblique angular, amalungu alungisayo anxephezela ukujiya kwezindonga ezihlukene.
Okwedlule: 65 Steel Frame Formwork
Olandelayo: Imoto yokufaka i-Arch